Professional Translator Meet-up • POINT
Professional Translator Meet-up
July 7, 2018 @ 2:00 pm - July 8, 2018 @ 6:00 pm
« I Can’t to We Can
ဘာသာပြန်​ခြင်​းကိုစိတ်​ဝင်​စားပြီး ဘာသာပြန်​လုပ်​ငန်​းနဲ့ အသက်​​မွေးဝမ်​း​ကျောင်​း ပြုလိူသူများအတွက်​ နာမည်​ကြီးဆရာများနှင်​့ တစ်​ဦးချင်​းစီ​ဆွေး​နွေးခွင်​့ရမည်​့ပွဲ​လေးတစ်​ခုကို ဖိတ်​ကြားပါရ​စေ။
ဆရာများမှ ဘာသာပြန်​အ​တွေ့အကြုံများကိုမျှ​ဝေခြင်​းသာမက ဘာသာပြန်​ဝန်​းကျင်​အသီးသီးအတွက်​ ဗဟုသုတ များကိုပါ သင်ယူရမှာ ဖြစ်​ပါတယ်​။
ဒါ့အပြင်​ ပွဲတက်​​ရောက်​သူများအ​နေနဲ့ Peak Point Translation Hub မှာ အခမဲ့အသင်းဝင်​ခွင်​့ရပြီး Peak Point Academy နှင်​့ချိတ်​ဆက်​ထား​သော ​အေဂျင်​စီ​များနှင်​့ပါ Part Time /Full Time ဘာသာပြန် အလုပ်​အကိုင်​ အခွင်​့အလမ်​းများ ရရှိမှာဖြစ်​ပါတယ်​။
လူဦး​ရေ ၃၀ ပဲ ကန်​့သတ်​ထားတဲ​့အတွက်​ အခုပဲ စာရင်​းသွင်​းလိုက်​ပါ။ တစ်ဦးလျှင် (၄၀,ဝ၀ဝ) ကျပ် ကျသင့်မှာ ဖြစ်ပြီး ဇွန်​လ ၃၀ရက်​​နေ့ မတိုင်​ခင်​ စာရင်​း​ပေးသွင်​းပါက 25% Promotion ရရှိမှာ ဖြစ်​ပါတယ်​။
Date – July 7th & 8th
Day – Saturday & Sunday
Time – 2:00 – 6:00 PM
Price – 40,000 MMK
25 % Promotion before June 30th
Ph – 01 249 607 , 09 77 89 000 24
Address- No. 170-176, Rm no, 409, MGW Center, Bo Aung Kyaw Rd, Bo Ta Htaung Township, Yangon
Professional Translator Meet-up Schedule
2:00 – 3:30 – ဆရာဟိန်းလတ်မှ သူ၏ဘာသာပြန်အတွေ့အကြုံများအကြောင်း ဟောပြောခြင်း။
3:30 – 4:00 – Refreshing & Networking
4:00 – 6:00 – ဆရာဟိန်းလတ်မှ မှားတတ်သော ဝေါဟာရများအကြောင်း ဝေမျှခြင်း။
2:00 -3:30 – Peak Point Academy ၏ Academic Manager ဖြစ်သူ ဆရာမရတနာက မြန်မာဘာသာမှ အင်္ဂလိပ်ဘာသာသို့ ပြန်ဆိုရာတွင် ဝေါဟာရရွေးချယ်ခြင်းဆိုင်ရာ အတွေ့အကြုံများကို မျှဝေခြင်း နှင့် Peak Point Academy နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော ဘာသာပြန်အဖွဲ့အစည်းများတွင် ရရှိနိ်ုင်သော အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းကို ဖော်ပြခြင်း။
4:00 – 6:00 – ဆရာမြေမှုန်လွင် နှင့် ဆရာမိုးသက်ဟန်တို့မှ သူတို့၏ ဘာသာပြန်အတွေ့အကြုံများ ဆွေးနွေးပေးခြင်း
01 249 607 , 09 77 89 000 24
No. 170-176, Room no - 409, MGW Center, Bo Aung Kyaw Road, Bo Ta Htaung Township,.
Yangon, yangon 11161 Myanmar + Google Map